Izindaba - Isitifiketi esinezimpawu zobunikazi siyeza….
Wake waba nalesi simo esilandelayo:
Amakhethini kufanele ehliswe futhi agezwe, kepha indle ayiphakeme ngokwanele ukuthi ifinyelele.
Izinto ezingaphezulu kwekhabhinethi azikwazi ukufinyelelwa, ngakho nginyathela ngqo esihlalweni sehhovisi.
Lezi yizinto ezizovela ezimpilweni zawo wonke umuntu. Kunezingozi ezinkulu zokuphepha kulokhu, futhi kulula ukuwa nokuwa. Ingabe kukhona isitulo esanele esanele esiphephile, eside, futhi esingathathi isikhala?
Okulandelayo, ake sethule lo mkhiqizo-wethu isitulo esisha sesinyathelo, noma ngabe kwenzelwa ukufakwa nokunakekelwa kwekhaya, noma ukulala kancane uma ukhathele, noma uma ufuna ukukhuphukela phezulu futhi ubheke kude, kuzoba ngumsizi omuhle kuwe. Hlanganisa i-ANSI ejwayelekile yamanje yemakethe ejwayelekile yaseMelika ukwenza isingeniso kulolu hlobo lomkhiqizo. Izinga ikakhulukazi lilawula ukuhlukaniswa komzimba okuyinhloko nokuhlukaniswa kwempahla kwemikhiqizo yesitokisi sezinyathelo, izimo ezisebenzayo zemvelo zezinhlobo nosayizi ohlukile, amandla jikelele nokushayisana okuhlobene nokusebenza kokuphepha.
1. Aluminium ingxubevange impahla
Lo mkhiqizo usebenzisa amaphrofayili wezimboni anamandla amakhulu angama-6005, ngobulukhuni beWebster obukhulu obedlula i-14, (izitebhisi ezijwayelekile ze-aluminium yasendlini zingamaphrofayli angama-6063, ngobulukhuni obungamadigri ayi-12)
2. Iphoyinti lokuxhuma lihle futhi liqinile
Uhlaka lwephedali nesitebhisi lisebenzisa isixhumanisi esakhelwe ngaphakathi esinezikulufo, esinamandla futhi esihle kakhulu kunesixhumanisi esivamile sesikulufu.
3. Idizayini enelungelo lobunikazi
Idizayini enelungelo lobunikazi lokulwa nokuncina ivimbela ukulimala kwesandla okubangelwa ukungasebenzi kahle lapho iladi livuleka.
4. Amandla okuthwala umthwalo oqinile
Ingcindezi enkulu yokuhlolwa kwesitebhisi ingafinyelela kuma-540kg (cishe amakhilogremu ayi-1200), ahlangabezana ne-American ANSI 1A standard (ingcindezi enkulu yokuhlolwa kwesitebhisi esivamile se-aluminium yasendlini ingaphansi kuka-300kg).
Ngama-pads anti-slip pads enyaweni zakho kanye nama-handrails ama-anti-slip endaweni ephakeme kakhulu, uzovalelisa ngenkathi yokukhuphuka nokuhamba.
Ungayisebenzisa kanjani ngokuphepha
1. Unganyakazi lapho umuntu emi esitobhini sezinyathelo.
2. Ngomsebenzi wokuvikela ukuqhuma kwamandla, ungaphathi izinto ezisindayo noma amathuluzi ezandleni zakho lapho ukhuphuka.
3. Ungeqi isisindo somkhiqizo osetshenzisiwe lapho uwusebenzisa. Lesi sisindo ngokuvamile sifakwa ilebula emaphaketheni angaphandle noma ebusweni besitebhisi.
4. Ungami kuma-pedal unabantu ababili ngasikhathi sinye.
5. Hlola ukuthi isitebhisi sesinyathelo sigugile noma siphukile ngaphambi kokusetshenziswa.
6. Ngaphambi kokusetshenziswa, qinisekisa ukuthi zonke izingxenye zesitebhisi zenziwe ngokuyalelwa. (Isibonelo, ukuthi ihenjisi livulwe ngokuphelele, noma ngabe imilenze iyisicaba, ngabe kukhona imfucumfucu engaphansi konyawo lwesitebhisi sezinyathelo).
Amayunithi Wokushefa Amakamelo Okulala I-White Storage Shelf Unit Amayunithi Wokugcina Amasheya Okuhweba Indawo Yokubeka Amashelufa Ishalofu Elincane Lokugcina Amashalofu Ekhaya